राष्ट्रपतिले ख्याल नगर्दा ! – TajaNepal
Home /Blog/राष्ट्रपतिले ख्याल नगर्दा !
काठमाडौँ । राष्ट्रपति आफैँ सरकार प्रमुख आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष । अझ भन्ने हो भने दासढुङ्गा घटनाको छानबिन टोलीका नेता नै खड्ग ओली थिए । तर विद्या भण्डारीले राष्ट्रपतिको तहबाट दासढुङ्गा घटनाका बारेमा रामकुमार वान्तवा राईको सम्झनामा स्थापित एमालेकै कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा कुरा उठाउनु कति प्रासङ्गिक छ ? विद्या आफैँ रक्षामन्त्री पनि भइन् । एमालेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र खड्ग ओली यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भए । गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय एमालेकै तर्फबाट नेतृत्व गरेको विगत पनि थियो । वर्तमान त सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख नै एमालेका छन् ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । मदन भण्डारी दुर्घटनाको पाटो सत्यतथ्य छानबिन उति बेला पनि भयो । एउटा प्रमाण थिए– अमर लामा । उनलाई यसै साप्ताहिकको कार्यालयबाट अपहरण गरी कीर्तिपुरमा लगेर मारियो । त्यो बेला सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा शाही सरकार थियो । गरिमामय पदको ख्याल मान्छेले गर्नुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति भएको विद्याको सवारी सञ्चालन राजाका बडामहारानीहरू भन्दा कम छैन । नेपाली काँग्रेसका महाराज डा. रामवरण यादव सङ्घीय लोकतन्त्र, समावेशी गणतन्त्रको राष्ट्रपति बन्दा ३० वर्षको पञ्चायती शासनमा राजाहरूप्रति गरिएको चाकडीको रूप मेटाउने चासो दिएनन् । नेपाली सेनाले अनावश्यक चाडकी ग¥यो भनौँ भने सरकारमा नेपाली काँग्रेस जस्ता भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसनखोरमुखी प्रजातन्त्रवादी शक्ति सत्ताको नेतृत्वमा रहँदा डा. रामवरण यादव यो मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति भए । एमाले–माओवादीको गठबन्धनले राष्ट्रपति बनाइएकी विद्या भण्डारीको पारा र सवारी प्रवृत्ति पनि डा. रामवरणको भन्दा कम भएन । सडक यात्रा गरौँ त राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूको सवारीप्रति जनताको आक्रोश कस्तो हुन्छ ?
राष्ट्रपति आफैँले चासो लिएर सेनाले देखाएको बढी चाकडी अन्त्य गर्न किन सकिनन् ? सरकारको तहबाट गर्नुपर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले किन निरङ्कुश राजतन्त्रकै जस्तो झल्को दिने गरी सडक जाम गरेर सवारी चलाउँछ ? रक्षामन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीका छन् । भाषण जनतालाई सेवा दिने, महँगी घटाउने, भ्रष्टाचार रोक्ने भन्छन् तर आपूर्तिमन्त्री भने कर्मचारीले गर्दै आएको बजार अनुगमन रोक्छन् । यही हो, एमाले र माओवादीको समृद्धि र विकास ? सडकमा जनतालाई घन्टौँ खडा गरेर राष्ट्रपति घोडाको घेरामा संसद् भवन सवार हुँदाको सडकको पीडा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्दैन ? गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्रकै झल्को किन दिइन्छ ? किन चाहियो अगुवा–पछुवा सेना, सशस्त्र र प्रहरीको सुरक्षा ? अपराध गर्नेलाई सुरक्षाको खाँचो हुन्छ । अहिलेका शासकहरूले आफैँ अपराध गरेका छन् भने भड्किलो सुरक्षा आवश्यकता ठान्लान् ? जनपक्षीय हुँ भन्ने पार्टी र नेताका लागि हाल विद्यमान सवारी व्यवस्था सुहाउँदो भएन ?